Izindaba - Amarobhothi asekhaya abe yiMakethe Enkulu Kakhulu YamaRip Slings Rings
Ekusebenziseni i-robotic, i-slip ring yaziwa njengerobhothi elijikelezayo noma elijikelezayo lamarobhothi. Isetshenziselwa ukudlulisa isignali namandla kusuka kuhlaka lwesisekelo kuya kuyunithi yokulawula ingalo ye-robotic. Inezingxenye ezimbili: ingxenye eyodwa emile ibekwe engalweni yamarobhothi, futhi ingxenye eyodwa ejikelezayo inyukela esihlakaleni samarobhothi. Ngokuhlangana kwerobhothi ngokuhlanganyela, irobhothi lingafinyelela ukujikeleza okungapheli okungama-360 degree ngaphandle kwezinkinga zekhebula.
Ngokuya ngemininingwane yamarobhothi, amasongo erobhothi ahlukahluka kakhulu. Imvamisa irobhothi eliphelele lizodinga amasongo amarobhothi amaningi futhi la masongo amasilayidi kungenzeka ukuthi anezidingo ezihlukile. Kuze kube manje, i-AOOD isivele inikeze oxhumana nabo abaningi abajikelezayo bezingilazi ezinsizeni ezifakwa kuma-robotic kufaka phakathi ama-compact capsule slip izindandatho, ngamasongo ama-bore slip, amasongo e-pan cake slip, amalunga we-fiber optic rotary, amalunga we-electro-optic rotary kanye nemihlangano eyakhelwe amasiko .
Imakethe yokufaka isicelo enkulu kunawo wonke emarobhothi yamasongo ashibilikayo iyimakethe yamarobhothi asekhaya esikhundleni semakethe yamarobhothi asezimbonini. Imvamisa, amarobhothi ezimboni anezidingo eziphakeme zamasongo okushelela kanye nezindawo zokusebenza nokusebenza kwazo okuhlukile. Ngokuphathelene, amarobhothi asekhaya anezidingo eziningi ezilula zamasongo okushelela. Amarobhothi ahlukahlukene asekhaya anemisebenzi ehlukene futhi, njengamarobhothi wokuhlanza i-vacuum, amarobhothi wokuhlanza phansi, amarobhothi aphansi, amarobhothi wokuhlanza amachibi namarobhothi wokuhlanza i-gutter, kepha onke ahlanganyela ngokuma okuncane okufana nendawo yokusebenza, i-AOOD compact capsule slip ring oxhumana nabo usayizi omncane, amandla okudlulisa isignali aphezulu kanye nezindleko eziphansi, bayakwazi ukuhlangabezana nazo zonke izidingo zamarobhothi asekhaya we-360 degree rotation engapheli kusuka engxenyeni yabo engaguquki kuya engxenyeni ejikelezayo.